ငါတောင်တက် Rock မှလွန်းစဉ်းစားသလား?
by Stewart ကအစိမ်းရောင်
သငျသညျတောင်တက်စတင်ရန်အလွန်အကျွံအလေးချိန်လျှင်အံ့သြတောင်တက်သမားအစတစ်ဘုံကိုကွောကျရှံ့ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုဆုံးဖြေ "အဘယ်သူမျှမကသင်သည်အကောင်းတစ်ရော့ခ်တောင်တက်သမားဖြစ်ဖို့ပိန်ကပ်-ပုံဖြစ်မရှိကြပါဘူး။ " ဖြစ်ပါတယ်
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖို့စူပါဂျပိန်နှင့်အမွေးအလင်းဖြစ်ရန်မလိုပါတောင်တက်သမား-ပေမယ့်ကူညီပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ပိုလျှံပေါင်အချို့ကိုဆုံးရှုံးလျှင်သူတို့လွယ်ကူသောတောင်တက်တက်လာပြီထံမှသင်တို့ကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်ဒါဟာအစ, ကူညီပေးသည်။
သင်မှန်မှန်တက်ပြီးအထဲကရခဲ့လျှင်, သင့်ဒေသခံသွားတူသော မိုးလုံလေလုံတောင်တက်အားကစားရုံ စုံတွဲတစ်တွဲအဆတစ်ပါတ်ကိုသင်ဖြစ်ကောင်းသူတို့အားအပိုပေါင်အချို့ကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါချောက်ထဲရန်, များသောအားဖြင့်ကုန်းတက်, တောင်တက်, ကျောက်အနှံ့ရွေ့လျားနေချိန်တွင်သင်သည်လည်းမီးလောင်သောကယ်လိုရီများကပေါင်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ကတည်းကဒါဟာအပြင်ဘက်ကိုတက်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။
ရော့ခ်တောင်တက် footwork နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားများကဲ့သို့ကောင်းသောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ထက် brute တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအကြောင်းကိုနှင့်သင့်လက်နက်နှင့်အတူရော့ခ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်ဆွဲအကြောင်းပါ။ အောင်မြင်သောတောင်တက်သမား ဟာသူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုအသုံးပြုဖို့ မဟုတ်ဘဲမတ်စောက်သောကျောက်ကိုတက်ရဖို့သူတို့ရဲ့လက်နက်အပေါ်မှီခိုထက်အထက်သို့သူတို့၏အလောင်းများကိုတွန်းအားပေးရန်။ သင့်ရဲ့ခြေထောက်ကသင်၏လက်နက်ထက်ဝေးတန်ခိုးကြီးကြကတည်းကအဲဒီအသိကိုမှန်ကန်စေသည်။
ကြောကျမကျြနှာပွငျဒေါင်လိုက်မှ steepens အခါ, သငျသညျအထက်သို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ကူညီဖို့ရန်သင့်လက်နက်နှင့်ပခုံးကိုအသုံးဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ ဤသည်သင်၏အစွမ်းသတ္တိ-to-အလေးချိန်အချိုးပေါ်မူတည်ပြီးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဘောင်ပေါ်ထုပ်ပိုးသောကပိုပေါင်, ပိုအလေးချိန်သင်ကိုတက်နိုင်ပါလိမ့်မည်အဘယ်အရာအတွက်အစစ်အမှန်ကန့်သတ်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တက်တငျမွှောကျဖို့ရှိသည်။
ဒါဟာထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြောင်းပြားသို့မဟုတ်ရော့ခ်မျက်နှာများဖြစ်ကြောင်းကမ်းပါးတက်ပြီးနှင့်အတူကပ်ရန်အကောင်းဆုံးရဲ့ ဒေါင်လိုက် ။ သငျသညျသင်၏ခြေကိုအုပ်စိုးဗဟိုပြုသင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်ကမ်းပါးကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်မောင်းနှင်ရန်ခြေထောက်အာဏာကိုပိုမိုအားကိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ရွတ်ခြင်းနှင့်ကြွက်သား strain နှင့်ဒဏ်ရာရှောင်ကြဉ်ပါ
ရွတ်ဒဏ်ရာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်, ခက်လွန်းကိုတက်သင်သည်မည်သည့် strain ခံစားရလျှင်သွားနှင့်ဆင်းကိုလျှော့ချပါစေနှင့် pumped သို့မဟုတ်လွန်းပင်ပန်းတဲ့ရှောင်ရှားကြပါဘူး။ ဒါဟာချဆုတ်ခွာနှင့်တစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာလမ်းကြောင်းကောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုတက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လွန်းအရေးကြီးပါသည်။ ကြွက်သားနှင့်အရွတ်အချုပ်ခန်းသို့မဟုတ်ဖြတ်ရှောင်ရှားရန်တက်ပြီးမတိုင်မီလုံးဝဆန့်။
သငျသညျအဝလွန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထွက်. ကြိုးစားကြ ကျောက်တောင်တက် တစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဒါမှမဟုတ်မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံမှာ။ ငါကော်လိုရာဒိုအတွက်ကုမ္ပဏီတက်ခြင်းတပ်ဦး Range မှတစ်ဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့က-အဆောက်အဦ outings အပေါ်ကြီးမားသောအုပျစုမြားကိုလမျးညှနျသောအခါ, အဝလွန်နှင့်ကျောက်တောင်တက်သွားကြဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြောင်းအနည်းငယ်ရှေးရှေးအစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာငါ "သင်တက်ပြီးကြိုးစားကြဖို့လိုသလား?" သူတို့ကိုမေးဖို့ သူတို့ပြုလျှင်, ထို့နောက်ငါအပို-ကြီးမားသောကြိုး၌သူတို့ကိုမတ်မတ် (အမြဲသင်သည်လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ girth fit ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားသောကြိုးကိုအသုံးသေချာအောင်) နှင့်အမျှမြင့်မားတဲ့သူတို့တစ်လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းအပေါ်ချင်တယ်အဖြစ်ကိုတက်ဖို့သူတို့ကိုပြောပြပါ။ အခြို့သောအဘို့, နှစ်ဆယ်ခွကေိုလုံလောက်စွာမြင့်မားသည်နှင့်လုံလောက်စွာတောင်တက်ပါပဲ။ အခွားသောဟဲဗီးဝိတ်, သို့သော်, ကခစျြနှင့်အခြားလမ်းကြောင်းများကြိုးစားရန်ချင်တယ်။
သငျသညျတက်ပြီးကြိုးစားသင်ကြာမြင့်သောအရပ်တို့ကိုမချစ်ကြလျှင်, ကသခြောသငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့နှင့်အဆင့်မြင့်ကိုတက်စတင်ကူညီပေးပါမည်။ ထိုသို့ Go ... ပဲသင်တစ်ဦးအကြီးမားဆုံးအရှုံးသမားဖြစ်လာကူညီပေးဖို့လက်မှတ်ဖြစ်နိုင်သည်တက်ပြီး!
နံနက်ငါအရမ်းဟောငျးကျောက်တောင်တက် Start သလော
Rocker ဒါဝိဒ်သည် Lee က Roth နှင့်ရီးရဲလ်မိုးမျှော်တိုက်ပုံပြင်
ငါဧဝရက်တောင်တစ်ပဲ့ထိန်းသို့မဟုတ် Non-ပဲ့ထိန်းတောင်တက်အပေါ် Go သငျ့သလော
အဆောက်အဦးအပြင်အပန်းဖြေလေ့လာအတိတ်မှ4နှစ်အတွက်တက်ခြင်းလျှော့ချ၏လူကြိုက်အများဆုံးဖော်ပြပေး
အဆိုပါ Mace တက်ပြီး: ဂန္ထဝင်အရီဇိုးနားကျောက်တောင်တက်
K2 အပေါ် Skier နှင့်တောင်တက်သမား Fredrik Ericsson က
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာကြည့်ရန် A & M တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
ဂေါက်ရိုးတံတွင် 'ကြိမ်နှုန်းကိုက်ညီမှု' '
သိသာ ... ဒါပေမဲ့မှား
Meritocracy: ရီးရဲလ်သို့မဟုတ် Myth ဟာ?
ဝီလျံရှိတ်စပီးယား၏ Sonnets မှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
နေရောင်ခြည်ကို Magic, ဒဏ်ဍာရီနှင့် Folklore
အဆိုပါ Goths ဘယ်မှာ မှစ. လာကြသလား
ဒုတိယအတန်းသင်္ချာ: သင့်ကလေးများ Menu ကိုနှုတ်မြွက်တော်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း Get
ဆောင်းရာသီ Jam ဇယား (2017) အားတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
သင့်ရဲ့လှေများအတွက်ထိပ်တန်း Wakeboarding မျှော်စင်
ထိပ်တန်း Funny ဆိုဒ်များတိုင်းနေ့ Read ရန်
မည်သို့ကာကွယ်မည်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရေး Sooty မှိုပင်ရောဂါ
ဗင်းနစ်တူးမြောင်း Frozen: ဓာတ်ပုံရီးရဲလ်သို့မဟုတ်အတုလား?
အဆိုပါ Olmec ယဉ်ကျေးမှု၏ငြင်းဆိုရန်
အာနိုး Palmer ကဖိတ်ကြားချက်ကိုဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
Ayuda တစ် inmigrantes Que sufren abuso အလုပ်သမားရေးရာ